‘सरकार छोड्नु भनेको प्राप्त उपलब्धि गुमाउनु हो’
‘सरकार छोड्नु भनेको प्राप्त उपलब्धि गुमाउनु हो’ शिवाजी यादव, नेता समाजवादी पार्टी
जनतापाटी आइतवार, मंसिर १, २०७६, १४:१८:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । सत्तारुढ घटक समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक दुई दिनसम्म चल्यो । यसअघि केन्द्रीय परिषद बैठकले सरकारबाट बाहिरिने वा नबाहिरिने निर्णय गर्ने जिम्मा केन्द्रीय समितिलाई दिएको थियो । बिहीबारको परिषद बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्ने सदस्यहरुले तत्काल सरकारबाट बाहिरिएर सडक संघर्षमार्फत संविधान संशोधनको मुद्धा टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने धारणा आएपनि तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने निर्णय पार्टीले गर्‍यो । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पटक पटक मंसिर १ गतेबाट सरकारमा नरहने भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । तर तत्काल समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना टरेको छ । यहि विषयमा केन्द्रीत रहेर समाजवादी पार्टीका नेता डा. शिवाजी यादवसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ सम्पादित अंश
मंसिर १ गतेबाट सरकारबाट बाहिरिने अभिव्यक्ति पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दिएपनि दुई दिनसम्म चलेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारमै बस्ने निर्णय गर्‍यो । किन ?
दुई बुँदे सहमति गरेर हामी सरकारमा गएको लामो समय वित्यो हामीसँग भएका सहमति अनुसार संविधान संशोधन भएन् । तर यो बिचका गतिविधि जुन छ त्यसले अहिले सम्म भएको उपलव्धिहरु जोगाएको छ ।
जुन जगमा हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ । त्यो भित्र भित्र धमिरा लागेर त्यही जग हल्लाउने धमिराहरु बढ्दै गएको अवस्थामा त्यसलाई कम्तिमा धमिरा लाग्न नदिने जुन हामीले संविधान जारी गरेपछि भएका उपलव्धिहरु कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र गम्भिर छलफल भयो । त्यो जोगाउन सके मात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्नेमा पार्टी ढुक्क देखियो । त्यसैलाई जोगाएर अगाडी बढ्नुपर्ने भएकाले । अहिलेसम्मका उपलब्धिहरु धरापमा नपरुन भन्ने उद्देश्यले सरकारबाट तत्काल नबाहिरिने निर्णय भएको हो । संविधानको संशोधनका लागि भएपनि सरकारमा बस्नुपर्ने अवश्यकता औँल्याइयो ।
भोली पटक पटक केन्द्रीय कमिटि बस्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले यो कुरा धेरै लामो जान नसक्ने । छिटै निर्णय लिनुपर्ने भएकाले अहिले सरकारबाट बाहिरिने नबाहिरिने अधिकार कार्यकारणी पदाधिकारीहरुलाई अधिकार दिने कुरा भएको छ । त्यहाँबाट निर्णय भएपनि अनुमोदनका लागि केन्द्रीय कमिटि हुन्छ बैधानिक रुपले तुरुन्त निर्णय गर्न गाह्रो नपरोस भनेर यस्तो गरिएको हो ।
केन्द्रीय परिषद्ले केन्द्रीय कमिटिलाई जिम्मेवारी दियो । तर संविधान संशोधन मुख्य माग राखेर पार्टी सरकारमा सहभागि भएपनि यो विषयमा सरकारले खासै चासो देखाएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारमै बसेर आफ्ना माग पुरा गर्छौ भनेर भन्नु कति औचित्यपूर्ण हुन्छ ?
यो हामीले बुझाउन नसकिएको हो की वा जनतामा भ्रम फैलाउने काम भएको हो, त्यो बुझ्न सकिएको छैन् । हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौँ । त्यतीखेर भएको खास सहमति संशोधनकै हो । हाम्रो माग भनेकै संविधान संशोधन हो । यसकै लागि सरकारमा गयौँ ।
संघियता र गणतन्त्र स्थापनापछि जुन नयाँ संविधान जारी भयो । यो संविधानका उपलब्धि जोगाउनलाई अहिले गाह्रो अवस्था देखिएको छ । किनकी बहुमत प्राप्त गर्ने दल जो संविधान जारी गर्ने बेलामा यो संघियता चाहिएकै छैन् । यो कसरी धान्न सक्छ भन्ने यावत कुराहरु भनिरहेका थिए । तर निर्वाचनमा जाने बेलामा जनताको मनोविज्ञानलाई बुझेर यो संशोधन गर्न सकिन्छ । यसैबाट परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जनतालाई कन्भिन्स गराएर । र जनतालाई संशोधनको ललिपप देखाएर झुक्याएर भोट लिए र बहुमत हुने खालको पार्टी बनाउनुभयो ।
अहिले नेकपाको एकल दुई तिहाइ भएको भए अहिले देशमा के हुन्थ्यो भन्न सकिँदैन तर जनताले पनि नापतौल गरेर मत दिए ताकी कुनै किसिमको एकल निर्णय गर्न नसकोस अहिले सहमतिय हिसाबले राष्ट्र अगाडी बढोस ।
अब यसमा को चाँही परिवर्तनका पक्षधर हुन । को चाँही नजिक छन् भन्ने कुराहरु यो संविधानलाई परिमार्जित गर्दै परिवर्तनलाई संस्थान गर्ने दल को हो त भनेपछि नेकपा र समाजवादी नै हो । यो पक्ष मिलेर दुई तिहाइ भएपछि देशलाई चाहेको जस्तो संविधान बनाउन हामी मिलेर दुई तिहाइको सरकार बनाउन सक्यौँ । किनभने दुई तिहाइ बिना संविधान संशोधन हुँदैन् । संशोधन नगरि देशको परिवर्तन पुरा हुँदैन् । त्यो उद्देश्यले गरेकोमा । नेकपाको पछिल्लो समयको माओवादी केन्द्र र एमालेको मिलनपछि त्यो पनि पुरा हुन सकेन् । यो सकारात्मक देशका लागि एकता हुनु रामे पक्ष हो भने हामी लचक भयौँ र समय दियौँ । हामी पनि एकता तिर लाग्यौँ । यी सकारात्मक पक्ष थिए । त्यो समय वितेपछि संविधान संशोधनका लागि जग बसाएको हो ।
नेकपाले पार्टी एकीकरणको काम पुरा गर्न सकेको छैन् । त्यो पुरा भयो ने संविधान संशोधन सुरु हुन्छ । भित्रभित्र त्यो किसिमको तयारी भएको बाहिर त्यो कुरा आएको छैन् । हामी दुबै दल तयार छौँ उचित समयको पर्खामा छौँ ।
पार्टी बैठकमा सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ भन्ने आवाज उडेपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नै हालिमुहाली हुने तरिकाले निर्णय गरेको समाचार आएका छन् नी ?
पत्रिकाहरुको अराजक शैली छ । हामीले लामो समयदेखि मेहनत गरेका छौँ । तर फरक दृष्टिकोणले हेर्ने । हामीलाई यो देशको अलग्गै पाटोको हिसाबले हेर्ने हामी चाँही समग्र राष्टको जिम्मेवार नागरिक हैनौँ भन्ने हिसाबले हेर्ने । हामी एउटा मधेसी मात्रै हो भनेर हेर्ने । अब उपेन्द्र जी त सिंगो पार्टीको हो नी । उपेन्द्र जी र बाबुराम जी समाजवादी पार्टीको हो नी एउटै पार्टीका दुई वटा नेता हुन । अब अहिले पूर्व भनेर किन कोट्याउने । यदि कोट्याउनु नै थियो भने उपेन्द्र जीहरु पूर्व माओावादी हुन त्यहाँबाट कोट्याउनुपथ्र्यौ । त्यो किन भएन् ।
अहिले पनि यहाँका मिडिया किन गम्भिर भएका छैनन् । राष्ट्रिय दललाई पनि कुनै आरोप प्रत्यारोप गरेर क्षेत्रिय जातिय आरोप लगाउने किन गरेका छन् । बहुमत सदस्य बेगर कसले निर्णय गर्न सक्छ । उपेन्द्र जी एक्लैले कहाँ निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ । सबैले आफ्नो तर्क गर्नुभयो । अध्यक्ष जीले मन्त्र िभएको हैसियतले सबै कुरा भन्नुभयो र सबैलाई कम्भिन्स गर्नुभयो । जनता जागरुक छन् । आज लेख्यो भोली अंक नआउँदा सम्म ध्यान दिनुपर्छ । होसियार हुनुपर्छ ।
यसले राजपासँगको पार्टी एकताको विषय के हुन्छ ?
राजपा सँगको एकताको कुरा बैठकमा उठेको थियो । त्यसको जिम्मा पदाधिकारीलाई निर्णय गरिएको छ । सिद्धान्त मिल्ने दलहरुसँग एकता गर्ने भन्ने विषयमा त पार्टीको पहिले देखिनै निर्णय भएकै हो ।
राजपासँग मुद्धा मिल्ने सँग सहकार्य गर्ने शिद्धान्त मिल्ने सँग एकीकरण गनेए भन्ने हो ।
अब राजपासाग एकीकरण नै गर्ने भन्ने हो । मुद्धा समान छ । हाम्रो सिद्धान्तमा उहाँहरु सहमत हुनुभयो भने एकीकरणमा जाने भन्ने हो ।
उहाँहरुको सरकारबाट बाहिर निस्किनुहोस अनि एकता गरौँ भन्ने उहाँको विचार भनेको राजनीतिक मात्रै हो । दलको व्यवहार होइन् व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कुनै संघसंस्थासँग गद्दारी गर्न सकिँदैन् ।
राजापाको सरकारबाट बाहिरिनुहोस् अनी एकता गरौँ भन्ने कुराको जवाफ हामील उहिले नै दिइसकेको अवस्था हो ।
यो कुनै एकीकरणको मुद्धा होइन् । हामी सहमतिको नजिक पुगिसेको अवस्थामा पदिय हिसाबले यो सबै हुँदै आएको हो । राजपाको कारणले यो सम्भव नभएको हो ।
अहिले हामी सरकारबाट बाहिरिएको अवस्थामा राजपा सरकारमा आउँछ । नेकपाले पनि हामीबीच भाँडो हाल्नलाई सरकारमा ल्याउन सक्छ । यसले प्राप्त उपलब्धि गुम्न सक्छन् । हामी यस्तो कदापी हुन दिन्नौँ ।
मन्त्रीमण्डल गठनसँगै श्रीलंकामा बढ्याे हिंसाकाे खतरा बुधवार, कार्तिक १४, २०७५, ०७:१२:००
दुई राजदूतलाई मन्त्रीसरहको मर्यादा, सार्क र विमस्टेकमा उपसचिव खटाइने शुक्रवार, चैत्र १, २०७५, ०७:०३:००
कोरोना नियन्त्रणका लागि चीनलाई ७७ देशको समूह ग्रुप ७७ ले सहयोग गर्ने मंगलवार, माघ २८, २०७६, १२:५३:००